Kittens dzinogona kudya riini ini ndinofunga | Noti Katsi
Uri kuchengeta katsi yakaitwa nherera here kana kutadza kudyiswa naamai vayo? Kana zvirizvo, uri kunyatso kushamisika kuti ungatange riini kupa yakawanda kana shoma chikafu chakasimba, handiti? Kudyisa bhodhoro chiitiko chakanakisa, icho chinokutendera iwe kuti ugadzire yakasarudzika chisungo neiyo furry, asi zvakare inodawo kwazvo. Unofanirwa kunge uchinyatsoziva nezvake, uye umupe chikafu nguva dzese dze3-4 zvichienderana nemavhiki aanayo (mashoma acho, ndipo paanowanzoda kunwa mukaka).
Iye anoyevedza uye chaizvo, ane hunyanzvi, asi pane inouya nguva apo paanofanira kumuka zvishoma uye kuve neanogona kuzvimiririra kuitira kuti atarisire ake ehupenyu zvinodiwa. Saka ngatione kittens dzinogona kutanga riini kudya?.
1 Ko mwana achangoberekwa anofanirwa kudya chii?
2 Kubva pakurumura kuramwa kusvika mukudya kwakasimba mukiti
2.1 Asati arumura
3 Nzira yekurumisa kittens
3.1 Zvimwe pane kurumura makiti
4 Ungadya rinhi ini ndofunga?
5 Kudyisa matipi emakiti
Ko mwana achangoberekwa anofanirwa kudya chii?
Katsi, kubva pakuberekwa kusvika pamasvondo matatu ekuberekwa, inofanira kupihwa mukaka wechipfuva chete. Kana izvi zvisingakwanise kuva, zvimwe nekuti amai vake havapo kana vasina hutano, anofanirwa kupihwa yavanotengesa mumakiriniki ezvipfuyo uye muzvitoro zvezvipfuyo kunyanya zvekatsi. Iwe haufanire kupa mukaka wemombe, sezvo iine lactose, inova shuga iyo inowanzo kukonzera matambudziko emudumbu.
Kungoti tikatadza kuwana mukaka wekatsi, tinokugadzirira iwe musanganiswa uyu:
250ml yemukaka wakazara usina lactose.
Yai yakasvibira yolk (isina chero chena)
Kana isu tisingakwanise kuwana mukaka wakakwana pasina lactose, tinogona kusanganisa zvinotevera:
150 ml yemukaka wakazara.
50 ml mvura
50 ml yakasikwa yogati
Raw zai yolk (isina chero chena)
Tinomhanyisa zvese zvakanaka kuti zvisangane zvakanaka, tinoipisa zvishoma kuitira kuti ive inodziya (inenge 37ºC) uye tinoipa mbwanana.
Kubva pakurumura kuramwa kusvika mukudya kwakasimba mukiti
Kana katsi ikarumurwa ndipo painopfuura kubva pamukaka waamai ichienda kuchikafu chakasimba uye ndicho chinhanho chekitsi sezvo chiri chikamu chakakosha pakukura kwavo. Kazhinji amai vekatsi ndivo vanoona nezvekurumwa, asi kana amai vaine matambudziko ekuburitsa mukaka kana kana marara emakiti akasara asina amai, saka tinofanira kupindira kuitira kuti vana vadiki vave nebudiriro yakanaka. Matipi anotevera ndiwo iwo aunofanirwa kuchengeta mupfungwa kuti maitiro acho ave akarurama.
Usati watanga kurumura zvakakosha kuti makiti anokwanisa kuwana mukaka wemuzamu kana colostrum ayo ane masoja ekudzivirira akakura pakukura kwawo. Kana kati isingakwanise kuburitsa mukaka wakakwana, katsi yega yega inofanirwa kuwana mukaka, zviri nani kugamuchira zvishoma pane kusatambira zvachose. Kana amai vane mastitis unogona kutsvaga imwe katsi inoyamwa kuti iwe unogona kufudza kittens kunyangwe asiri ako.
Kana pasina amai vanozvimiririra, mukaka fomura inofanira kushandiswa nebhodhoro kana sirinji. Vanogona kupihwa kwevhiki nhatu kana ina vaine bhodhoro (riri kudiwa) nguva dzose nebhodhoro rine mvura inopisa uye unofanira kutanga watanga kudurura mukaka paruoko rwako kuti uone kuti haupisi uye uri patembiricha yakanaka, zvakare ukazviedza zvirinani kutarisa kuti hazvina kusvotwa here. Kana iwe uri kushandisa fomura yeupfu, chengeta iyo isina kusanganiswa poda mufiriji. Ivo vanodyisa pane zvinodaiwa masikati neusiku.
Zvakanyanya kana zvishoma mukati memavhiki mana ehupenyu kana kurumurwa kwapera. Vachatanga kuyedza kudya chikafu. Kana vatanga kuruma nekutsenga bhodhoro imhaka yekuti vakagadzirira kutanga kudya chikafu chakasimba, kunyangwe pakutanga zviri nani kuva semi solid.
Nzira yekurumisa kittens
Kutanga kurumura katsi, sanganisa chikafu chekatsi nefomula yekuziva kwekunaka. Zora musanganiswa wakakomberedza muromo wavo nemunwe wako uye varege vayamwe pauri. Kana vachinge vajaira kuravira, vachatarisa kumwe kunhu kuchidya.
Wobva wavapa mundiro uye nyatsocherechedza kuti vasadye nekukurumidza uye vasasundidzire musoro wavo mudiki, vabvumire kuzviitira vega. Ichave iri pakati pechishanu nesvondo howa pavanokwanisa kuita shanduko zvishoma nezvishoma kuti vaome chikafu. Chikafu chinofanira kutanga chakanyoroveswa mumvura uye muvhiki rechinomwe nerechisere vanofanira kunge vatodya chikafu chakasimba.
Zvimwe pane kurumura makiti
Paunorumura katsi pane chikafu chakaomarara, zvinodikanwa kuti chikafu chaanotora chakanangana nekiti. Rudzi urwu rwekudya rune mapuroteni, mavitamini uye zvese zvinodiwa kuti vakure vakasimba uye vakagwinya.
Kittens dzichangobva kurumurwa dzinoda kudziirwa, saka zvakakosha kuti uise magumbeze kwavanorara uye zvinotonyanya kukosha kana pasina amai. Kupisa mapedhi kana mabhodhoro emvura anopisa pasi pemagumbeze kana matauro isarudzo yakanaka. Izvi zvinopa kittens kudziya kwakawanda kwavanoda.
Recuerda, que haufanire kumanikidza kurumurwa kudya chikafu chakasimba. Iyo inoitika zvishoma nezvishoma uye zvinodikanwa kuremekedza mutinhimira wayo. Ivo vanongoda moyo murefu wakawanda asiwo rudo rwakawanda.
Ungadya rinhi ini ndofunga?
Kamwe iyo katsi yasvika mavhiki e3-4, ichatanga kukwenya bhodhoro, maoko, uye chero chinhu chiri munzira yacho. Ichi chichava chiratidzo chekuti isu takamirira kutanga kumupa imwe mhando yekudya, nekuti mazino ake emukaka anenge atanga kubuda uye nekudaro, iwe unogona ikozvino kutsenga zvakapfava chikafu, senge katsi magaba (chikafu chinonyorova).
Sezvo iwe ungangodaro usingade kudya wega, isu tinotora chikafu chidiki nemunwe, isu tinovhura muromo wayo uye isu tichazvizivisa. Ipapo, tichaivhara zvakasimba asi pasina simba rakawandisa (hapana chakaipa kwariri) kusvikira yamedza. Mushure mezvo, tichamuunza mundiro ine chikafu uye, zvakasikwa, anogona kuzodya ega. Kana zvisina kudaro, tinogona kumugadzirira rudzi rweporoji nechikafu chakanyorova chakasanganiswa nemukaka wekiti, uye ndokumupa nebhodhoro kwemazuva mashoma.
Uine mwedzi miviri yekuzvarwa, unogona kumupa chikafu chekatsiAsi sezvo ichave isati yave nemazino akasimba kwazvo, inofanira kusanganiswa nemukaka wekiti kana mvura.
Kudyisa matipi emakiti
Zvekuti mudiki ane kukura kwakanakisa nekusimudzira kuri nani, Vanofanira kupihwa chikafu chemhando yepamusoro, chisina zviyo (chibage, oats, gorosi, mupunga) kana zvigadzirwaSezvo muviri wako usingade izvi zvinoshandiswa uye, muchokwadi, zvinogona kukukonzera matambudziko akasiyana ehutano munguva pfupi nepakati, senge allergies kana hutachiona hweweti. Hutano hwekatsi inyaya yakakomba. Mamiriro ake anoenderana zvakanyanya nerudzi rwechikafu chaanotora, pamusoro pekuchengetwa kwaanowana.
Isu, sevatariri venyu, Tinofanira kunyatsoziva nezvake uye nekumupa tarisiro yese yaanoda. Zvinoenderana nesu kuti mudiki anokura achifara uye aine hutano here, kana ... zvakapesana. Kana isu tisingakwanise kumuchengeta, zvakanakisa kumutsvagira imba nyowani, kana zvichibvira nerubatsiro rwemudziviriri wemhuka, anozotarisira kumuwanira mhuri inogona kutora mutoro wemudiki kusvika kumagumo mazuva ake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvokudya » Kittens ingadya rini?